Ukugula kuphazamise uMkhwane koweshashalazi
UKUGULA kuphazamise uBheki Mkhwane emdlalweni weshashalazi. isithombe: Itumeleng Khumisi
Thokozani Ndlovu | May 31, 2021
UKUGULA kwenkakha yomlingisi, uBheki Mkhwane, kuyihuthisele ngethuba lokulingisa emdlalweni weshashalazi iBopha, ebengomunye wabalingisi abaphambili kuwona.
Ukugula kukaMkhwane kuphoqelele ukuthi ahoxiswe kulo mdlalo oqale kuleli sonto.
Okhulumela umdlalo eState Theatre, uThakgatso Setseta, uthe badumele ngokugula kukaMkhwane, okuphoqe nokuthi akhishwe kuwona.
“UMkhwane ugule umdlalo usuzokhonjiswa, okuyinto esiphathe kabi. Indawo yakhe kuze kwaphoqa ukuthi ithathwe nguPercy Mtwa ongumbhali futhi ongumqondisi walo mdlalo,” kusho uThakgatso.
Uthe noma bengazi ukuthi uMkhwane uphethwe yini kodwa banethemba lokuthi uzolulama.
“Esikuzwile wukuthi akalaliswanga esibhedlela kodwa ugulela ekhaya. Udokotela umlalise amasonto amane engasebenzi, ukuze alulame kahle ngaphambi kokuba aqale ukusebenza. Simfisela ukuthi asheshe alulame,” kuqhuba yena.
UMkhwane ubezobe eqala ukulingisa kulo mdlalo osuneminyaka ukhona, osuphekwe kabusha.
UMtwa naye uthe udumele ngokuhlabeka kwenkakha yomlingisi egcine ingasakwazanga ukulingisa kwiBopha.
Uthe wafaka uMkhwane kulo mdlalo ngenxa yamagalelo akhe futhi ubenesiqiniseko sokuthi uzokwenza ubulungiswa ngokudlala kahle indawo kaNjandini abezoyilingisa. Uthe uMkhwane uyamhlonipha futhi udumele ngokungabi naye kule sizini yeBopha, wabe esemfisela ukusheshe alulame.
IBopha izogcina ukukhonjiswa eState Theatre ngoJune 13.
UMtwa akamusha naye ekulingiseni njengoba ayelingisa kuyona iBopha, yaze yajikeleza amazwe phesheya kwezilwandle. Ubuyele ekulingiseni emidlalweni yeshashalazi, begubha iminyaka engu-40 yeWoza Albert ngo-2019 eState Theatre, lapho abelingisa khona noMbongeni Ngema. KwiBopha njengamanje ulingisa noTshallo Chokwe noTerrence Ngwila. Indawo kaMtwa yokuqondisa lo mdlalo ithathwe nguMillicent Tintswalo obevele engumsizi wakhe ekuwuqondiseni.